Fitoviana thermomix modely TM5, TM31 ary TM21 | ThermoRecipes
Fitoviana eo amin'ny maodelin'ny Thermomix: TM5, TM31 ary TM21
Tamin'ny volana septambra 2014, i Vorwerk dia nanangana ny maodely vaovao fantatra amin'ny hoe TM5. Mpampiasa maro no nahazo an'io nandritra ny taona maro ary ny sasany izay nanana maodely taloha dia nanavao azy ireo. Na izany aza, satria manana fiainana maharitra mahasoa ireo milina ireo, dia mbola maro ireo manohy mahandro ao amin'ny TM31 (novokarina tamin'ny 2004) ary, kely kely kokoa, miaraka amin'ny TM21 (vita tamin'ny 1996). Te handrahoina amin'ny maodely rehetra ve ianao? Ilaina tokoa ny fahafantaranao ny fitoviana amin'ny maodelin'ny Thermomix TM5, TM31 ary TM21.
Ka ahoana no misy fahasamihafana kely Teo anelanelan'ny TM5 sy ny TM31, nihevitra izahay fa ilaina ny manoratra lahatsoratra manazava ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ireo robot 3 mba hanananao ny maodely anananao, afaka manohy mankafy ny fomba fahitanay ianao ary mampifanaraka azy ireo tanteraka Ampionòny ary ambonin'izany rehetra izany, seguridad.
Fitoviana eo amin'ny TM31 sy ny TM5
Ny fahasamihafana misy eo amin'ireo maodely roa ireo dia kely kokoa noho ireo eo anelanelan'ny 31 sy 21, ka ho mora kokoa ny mampifanaraka ny fomba fahandro anao. Lafiny roa ihany no mila jerena: ny mari-pana ambony indrindra ary ny fahafahan'ny vera sy ilay fitoeran-javatra varoma. Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany kokoa:
Ny mari-pana ambony indrindra amin'ny TM5 dia mihoatra ny 120º, raha ny TM31 dia mahatratra 100º fotsiny. Io dia manokatra isan-karazany ny fahafaha-manao amin'ny TM5, indrindra raha ny saosy na endasina no endasina.
Soso-pisakafoanana ary asio saosy: ao amin'ny TM5 dia tsy maintsy mandahatra 120º sy 8 minitra isika. Mandritra ny TM31 dia hametraka mari-pana varoma isika, 10 minitra. Ankehitriny miaraka amin'ny TM5 dia tsara kokoa ny mofomamy, volamena kokoa. Tsikaritra indrindra izany rehefa manosotra tongolo lay ohatra isika, ohatra, handatsaka azy ireo amin'ny trondro maamaina.
Maripana varoma: Amin'ny TM31 dia ampiasainay ny maripana Varoma saika amin'ny zava-drehetra: ny fivezivezena amin'ny varoma, ny endasina ary ny saosy, mampihena ny ranon-tsakafo ... Saingy, ao amin'ny TM5 dia tsy mila mampiasa ny maripana varoma fotsiny isika mba hiteraka setroka sy handrahoana ny kaontenera varoma na mampihena ny saosy.
Cook amin'ny 100º: Toy ny ao amin'ny TM31 miaraka amin'ny TM5 dia afaka mahandro legioma amin'ny 100º isika, ohatra, ka manohana ny fitehirizana ny fananan'ny sakafo na ny vary, izay hijanona amin'ny fotoana mahandro azy.
Fahaizan'ny fitoeran'ny varoma nitombo 10%, manomboka amin'ny 3 litatra an'ny TM31 ka hatramin'ny 3.300 an'ny TM5.
Ny tumbler koa dia nampitombo ny fahafaha-nataony tamin'ny 2 litatra ho an'ny TM31 ka hatramin'ny 2.200 ho an'ny TM5. Eto ianao dia mila mitandrina satria ny resipeo TM31 dia azo atao tsara amin'ny TM5, fa tsy amin'ny lafiny hafa satria mety hihoatra ny vera. Ka raha te-hanamboatra resipeo TM5 amin'ny TM31 ianao, alao antoka fa tsy mihoatra ny mari-pamantarana fahaiza-manao ambony indrindra (2 litatra).
Ny Varoma koa dia nampitombo ny fahaizany ary tena tsara toa azontsika atao ny mampiditra sakafo betsaka kokoa handefasana azy ireo miaraka amin'izay ary malalaka kokoa noho izy ireo izy ireo, manohana ny fivezivezin'ny etona tsara. Ohatra, izao isika dia afaka mametraka ranomasina na bream roa amin'ny fomba milamina kokoa na legioma bebe kokoa. Tombony ihany koa raha mametraka bobongolo mahitsizoro na tsirairay ho an'ny puddings na puddings satria modely maro no hiditra ao amintsika.
Miaraka amin'ny TM5 Nitombo ny hafainganam-pandeha faha-10 turbo hatrany amin'ny 10.700 31 rpm (raha nahatratra 10.000 ny TMXNUMX). Izany dia mahatonga ny fanomanana toy ny gazpacho na menaka ho finer ao anatin'ny fotoana fohy.
Andao hojerentsika amin'ny tabilao misimisy kokoa izany.
Tabilaon'ny fitoviana TM31 sy TM5
Famoahana setroka miaraka amin'ny harona sy / na varoma Maripana varoma Maripana varoma
Ahena ny saosy
(amin'ny alàlan'ny etona misy rano)
Maripana varoma Maripana varoma
Saute na sauté Sintoma varoma - 10 min eo ho eo Temperature 120º - 8 min eo ho eo
Max fahaizana. ny fitaratra Litera 2 Litera 2,200
Max fahaizana. ny varoma Litera 3 Litera 3,300
Mariposa Maximum amin'ny hafainganam-pandeha 5 Maximum amin'ny hafainganam-pandeha 4
turbo (na hafainganam-pandeha 10) Mahatratra 10.000 rpm Mahatratra 10.700 rpm
Fitoviana eo amin'ny TM31 sy ny TM21
Ity misy a latabatra fitoviana izay ilainao fotsiny ny manaraka ny laharana mifanaraka amin'izany, izany hoe raha ny resipeo namboarina ho an'ny TM31 dia milaza hoe "hafainganana sotro" ary manana TM21 ianao, ny zavatra tokony hataonao dia ny hafainganam-pandehan'ny programa 1 miaraka amin'ny lolo… mora, sa tsy izany?
Ankehitriny manana ny fanalahidy ianao ampifanaraho ny fomba fahandro rehetra amin'ny maodely TM21 anao.
Tabilaon'ny fitoviana eo amin'ny TM31 sy ny TM21
Hafainganana siny Haingam-pandeha 1 miaraka amin'ny lolo
Mihodina miankavia Mariposa
Manapaka, hafainganam-pandeha 4 Tetehina, hafainganam-pandeha 3 na 3 1/2
Grate, hafainganana 5 Grate, hafainganana 4
Torotoro, haingam-pandeha 7 ka hatramin'ny 10 Torotoro, haingam-pandeha 6 ka hatramin'ny 9
Fotsy fotsy, hafainganam-pandeha 3 1/2 Mitaingina mazava, hafainganam-pandeha 3
Araka ny ho hitanao, misy fahasamihafana miavaka eo amin'ny maodely 21 sy 31, toy ny mari-pana farafahakeliny na ny hafainganam-pandeha ho an'ny fiasa fototra amin'ny fanapahana, ny makarakara ary ny fikororohana.